Kala Duwan - Delta Injineer Belgium
Kaydso qeybta "Kala Duwan"
Tuesday, April 06 2021 by Sara
Orienter dhalada pneumatic
Ku dhajinaya dhalada (jirka) inta udhaxeysa 2 taarikada oo wareejineysa adoo adeegsanaya dhululubo sambabada wadata.
Published in kala duwan
Dhalooyinka qoorta ayuu ku qabtaa, wuuna wareejiyaa iyadoo la isticmaalayo xawaaraha kala duwan ee suunka.
Ikhtiyaari ah: kamarad caqli badan si loo ogaado jihada dhabta ah ee dhalada & si firfircoon ugu saxsan jihada la doonayo.
Qalabka wax lagu qabsado ee xaddidan
Qalabkani wuxuu kuu oggolaanayaa inaad qabsato xirmo gacmeedyo oo aad ku rido sanduuqa kartoonada ama aad ku sii deyso qalabka wax lagu rakibo ee qaboojiyaha.
Arbacada, 19 Agoosto 2020 by Sara
Codeeyaha u-gaarka ah
Si buuxda otomaatig u ah, mashiinka mashiinka hal madax loogu talagalay durbaanka Looma baahna jajabka aan dillaacin. Qaadada waxaa lagu aqoonsadaa nidaamka aragga, waxaana qabta & geliya robot. Xawaare: kudhowaad 500 - 800 BPH.
Tag: Joojinta khadka, meel badbaadin
Talaado, 10 Juun 2014 by Injineer Delta
Codsade si buuxda oo otomaatig ah loogu talagalay dhalooyinka balaastikada ah, oo ay ku jirto gacanta loo yaqaan 'unscrambler' Waxay yareyneysaa shaqada gacanta taas oo keenta soo laabasho gaaban maalgashiga. Xawaaraha: illaa 6500 BPH ama 12000 BPH (suurtagalnimada in loo weeciyo fijaanyada gariirka: 2 x 6500 BPH).
Si buuxda oo otomaatig ah, codsi madax-gaar ah oo loogu talagalay dhalooyinka caagga ah. Thanks to naqshad gacmeed jilicsan oo kacaan leh, waad iska ilaalisaa jahwareerka iwm Xawaaraha: qiyaastii 800 - 1200 BPH.
Tag: yaraynta, Joojinta khadka, dhalada
Khamiista, 26ka Febraayo 2015 by Injineer Delta
Qeybtaani waxay kuu ogolaaneysaa inaad sameyso saf ka sameysan qaab muuqaal leh, faaruq ah, dhalooyin caag ah oo ku jira qalabka hoose ee baakadaha dhalada ku jira. Dhalo kasta waxaa loo joojiyaa si madaxbanaan iyada oo loo isticmaalayo gogol-dhaafka micro u go'an. Cutubka waxaa si ikhtiyaar ah loogu rakibi karaa mashiinnada kale.
Isniintii, 26 Juun 2017 by Injineer Delta
Codeeyaha daboolka wasakhda ah
Cutubkani wuxuu dhigayaa dabool boodhka ah qoorta weelasha / dhalooyinka. Waxay ka ilaalisaa weelasha kahortaga wasakheynta sida boodhka, cayayaanka, iwm. Si buuxda ayey otomaatig u tahay. 6 kartoonno, oo ka koobnaan kara 50-100 fips midkiiba.
Isniin, 19 Abriil 2021 by Sara
HMT-1 glasses muraayadaha casriga ah
Muraayadaha casriga ah ee HMT-1 are waa kiniin gacmo-la’aan ah oo loogu talagalay shaqaalaha warshadaha. Waa aalad si buuxda u kacsan, qalab madax lagu rakibay oo loogu adeegsan karo jawiga warshadaha.
100% Gacan-la'aan: amarrada codka. Waad u adeegsan kartaa wicitaan fiidiyoow ah oo taageero fog ah (sidaas awgeedna yareynaya raadadka safarka), dukumiintiga dukumiintiga, iwm.